Wararkii ugu dambeeyay Kiisaska cusub ee Covid-19 ee Somaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Kiisaska cusub ee Covid-19 ee Somaliya
Wararkii ugu dambeeyay Kiisaska cusub ee Covid-19 ee Somaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ah ee Kiisaska COVID-19 ku sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay laga baaray cudurkaasi 1176 ruux.
Warbixinta maalinlaha ah ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay in la diiwaan geliyey 160 bukaan cusub oo soo ritay cudurka COVID-19 , taas oo ka dhigan in weli ay jirto khatarta uu dalkeena ku haayo cudurkaasi.
Sidoo kale, wasaaradda ayaa shaacisay in 24 saac ee la soo dhaafay ay 11 qof ay u dhimatay cudurka COVID-19 halka ay ka bogsadeen 65 qof.
Si kastaba, cudurka COVID-19 ayaa u muuqdo mid sii faafaya ayadoo ay jirto in bulshada Soomaaliyeed intooda badan aysan muujineyn taxadarka ka hortaga cudurkaasi.
Wasaaradda caafimaadka ee XF Soomaaliya ayaa wado daddaalo lagu wacyi-gelinayo bulshada Soomaaliyeed, si ay uga taxadiraan halista uu leeyahay Covid-19.
Kiisaska cusub Covid-19 ee Soomaaliya